အလင်းရောင်ကြယ်များ: May 2013
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 09:27:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လားရှိုးမြို့ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကာယကံရှင် မိသားစု၏ မချွန်းမချန် ပြောဆိုချက်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 06:56:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တောင်ကြီးမြို့ အနီးက သဘာဝ လှိုင်ဂူ အသစ်တွေ့
ယခင် တောင်ကြီးမြို့ ဘုရားဖြူရပ် ပညာဗောဓိ ကိုရင်လေးကျောင်း အနီး နိပ္ဘန်ေ၇ွှဂူ တော ရကျောင်း တွင် သီ တင်း သုံးနေထိုင်သော ဆရာတော် အရှင် စန္ဒောဘာသ မှာ တပ် မှမြေနေရာ သိမ်းရာတွင် ပါဝင် သွား သဖြင့် ဓမ္မ ရတနာကျောင်း တိုက်တွင် ပြန်လည် သွားေ၇ာက်ပြီး သီတင်း သုံးနေထိုင် လျက်၇ြှိ ပီး အဆက် အ သွ ယ်မရခဲ့သည်မှာ တနှစ်နီးပါး ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 05:41:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကျွန်တော် က ရဲတိုက်ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ ကို အင်တာဗျူးပြီး သူ့ဘ၀ အကြောင်းကို စာရေးဖူးတယ်။ အင်တာဗျူး ခဲ့တာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့် ကို ပြောပြ သလောက် ဘယ်သူ့ကိုမျှ မပွင့်လင်းခဲ့ဖူးဘူး လို့ သူကပြန်ပြောတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 09:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ ပေးစာ
ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့၊ တစ်အိမ်ထောင် သားသမီး နစ်ယောက်ထက် ပေါ်မယူရဘူးဆိုတဲ့ ဒေသန္တရ ဥပဒေဟာ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် မညီဘူးလို့ ပြောချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကုလားတစ်ယောက် မယားလေးယောက်ယူနေကြတာကရော့ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ညီပါသလား။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရော အဆင်ပြေရဲ့လား။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 07:30:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဘုရားတန်ခိုးကြောင့် အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ဟု လားရှိုးမြို့ နယ်မှ မီးရှို့ခံရသူ မအေးအေးဝင်းပြောဆို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 06:40:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မေလ၃၁ရက်၊ နေ့လည် ၃နာရီ ၀န်းကျင်က ရဲတိုက်ဟာ ဗိုလ်တစ်ထောင်ရဲစခန်းမှ အာမခံနဲ့ ပြန်လွတ်လာပြီလို့သိရပါတယ်..
စိန့်မေရီ ဘုရားကျောင်း သာသနာ့အကျုိုးတော်ဆောင် ဥက္ကဌနဲ့ အတူ လက်ဆွဲနုတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 05:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပြောကြောင့် ကလေးမွေးနှုန်း ကန့်သတ်ချက် ရုတ်သိမ်းဖို့ ကုလတောင်းဆို
Google image မှ---------------------------------------------------------------------------------------
ဘင်္ဂလီ တစ်မိသားစု ကလေး နှစ်ယောက် ပေါ်လစီဟာ လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ မညီဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည် မှ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကန့်ကွက်ပြီးနောက်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများစုနေထိုင်တဲ့ ရခိုင်ပြည် နယ် ဘူး သီးတောင်-မောင်တောမြို့နယ်တွေမှာ တစ်အိမ်ထောင် ကလေး ၂ ယောက်ထက် ပိုမယူရ ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြား ချက်ကို ရုပ်သိမ်းဖို့ ကုလသမဂ္ဂ က တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 03:06:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၁၉ နှစ် ထောင်ကျခဲ့တဲ့မိခင်ကို သားက ကယ်ထုတ်နိုင်ပြီ
ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်မှာ ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်ကို မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်
ထောင်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ ကန်ဟေယာ ကုမာရီက အင်မတန်ဝမ်းသာခဲ့ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ လူမသိလိုက်တဲ့ ၁၉ နှစ်ကြာဖြစ်ရပ်ပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/31/2013 12:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
" သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ- သီရိဓမ္မင်္ဓါရာမ မဟာဝိဟာရတွင် အပူဇော်ခံစဉ်
ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖူးမြင်ရသည့် ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆံတော်မြတ် "
ပုံတော်မူလပိုင်ရှင် - ဆာမိသာကာလန္နာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 11:42:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၀.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၆၀၀ အချိန် အင်းစိန်အကျဉ်းဦးစီးဌာနလိုင်း
နေ ဦးမြင့်အောင်သည် အလုပ်သို့သွားခဲ့ပြီး မိသားစုများမှလည်း
အလုပ်ဖြင့် အပြင်သို့သွားရောက်စဉ် နေအိမ်အား
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 11:18:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ လုံခြုံရေးတပ်ခွဲ (၂)မှ ခိုးမှုတရားခံ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
၈.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၃၀၀ အချိန်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
(၁၁)ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာလမ်းနေ ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း သည် ရွှေ၊ငွေများထည့်ထားသည့် လက်ကိုင်အိတ်အား အိပ်ယာဘေးတွင်ထား၍ အိပ်ခဲ့ရာမှ ၉.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့
၀၅၀၀ အချိန် နေအိမ်နောက်ဖေးတံခါးပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် လက်ကိုင်အိတ်အားစစ်ဆေးကြည့်ရာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 11:11:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 11:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နောက်ဆက်ကြည့် ရန်ကျန်ပါသေးတယ် ရှေ့ သို့ ဆက်ဖတ်ရန်အနီရောင်စာကိုနိပ်လိုက်ပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 11:16:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင်ဖေ့စ်ဘုတ်မှာsexပုံစံကျနေလို့ ပိုင်ရှင်အုပ်ထိမ်းသူများသိစေရန်မေးဖြင့်လာရောက်ပေးပို့ တိုင်ကြားသွားပါတယ်။
ဖုန်းတွေကပလူပျံ ထင်ကရာတွေတင် ။မိဘတွေကမသိ။ပညာရေး အလေးမထား။အင်တာနက်ပေါ်မှာ
အကျိုးမဲ့ စွာ SEXY စကားလုံးတွေနဲ့နို့ နံ့ မပျောက်။တင်ပြခံစား။ပျက်ဆီးဘို့ ကတော့များနေပြီ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 09:16:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒါလားကွ မြန်မာ့ ယာဉ်ကျေးမှု့ 
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 08:53:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လားရှိုးမြို့ မီးလောင်ဆူပူမှုများဖြစ်ပေါ်ရသော အကြောင်းရင်း အမှန်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 08:28:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တစ်ကယ်အခက်ခဲဖြစ်နေသူပါ။နီးစပ်သူများ-ဆုတွေရတဲ့N.L.Dမင်းကိုနိုင်တို့ များ ကြားရာအရပ်ကကူညီလိုက်ပါဗျာ
မှ မသီတာအေးဖြစ်ပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာကြောင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 06:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၄.၆.၂၀၁၃ သောကြာနေ့ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတဘောလုံးယာဉ်ပြိုင်မည်
မသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲ့ချုပ် ရန်ပုံငွေအဖြစ် ရုပ်ရှင်မင်းသားများပါဝင်သည့် ဘိုင်စကုတ်မင်းသားများအသင်းနှင့် ဂီတနယ်ပယ်မှပညာရှင်များပါဝင်သည့်
ဂီတအနုပညာရှင်အသင်းတို့သည်၁၄.၆.၂၀၁၃ သောကြာနေ့(အောင်ဆန်းအားကစားကွင်း) တွင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည်ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 06:12:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 05:45:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပိုလန်နိုင်ငံမှာ ဖွားပြီး ပြင်သစ်မှာ ရူပနဲ့ ဓာတုဗေဒ ပညာလေ့လာတဲ့ Marie Curie အမည်ရ အမျိုးသမီးဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် အမျိုး သမီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုလန်ငွေစက္ကူတွေထဲမှာလည်း သူမပုံကို ထည့်သွင်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ Radioactivity သီအိုရီ ကို စတင်ထုတ်ဖော်နိုင်သူ၊ radioactive isotopes ခွဲထုတ်ခြင်း နည်းပညာကို ဖန်တီးသူ၊ ပိုလိုနီယမ်၊ ရေဒီယမ် အစရှိ သဖြင့် ဒြပ်စင် နှစ်ခု ရှာဖွေတွေ့ရှိသူ အဖြစ် အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး အခြားသော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုပေါင်း များစွာ ရရှိထား သူ ဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 02:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သီရိလင်္ကာ ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ ၂၈ဦး ထပ်မံပြန်ပို့ခံရ
သြစတြေးလျအစိုးရက ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ အကြောင်း
ပြချက်မခိုင်လုံတဲ့အတွက် နောက်ထပ် သီရိလင်္ကာ လူမျိုး ၂၈ယောက်ကို သီရိလင်္ကာမြို့တော်ကိုလန်ပိုကို ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 01:00:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Wi-Fi လှိုင်းများကြောင့် အပင်များကို သေဆုံးနိုင်ဟုဆို
ဒိန်းမတ်၊ မေ ၂၇
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ၉ တန်းကျောင်းသူအုပ်စုတစ်စုသည် Wi-Fi signal များဖြင့် အပင်များ သေဆုံးနိုင်ကြောင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြသပြီး ကမ္ဘာကိုအံ့သြသွားစေခဲ့ကြောင်း ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် DR တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/30/2013 12:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
The Hot News Journal
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 11:40:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လူမျိုးပေါင်းစုံ ရွှေ့ပြောင်း အခြေချခွင့်ဥပဒေအား နယ်သာလန်နိုင်ငံ စွန့်လွှတ်။
ယခုအချိန်တွင် မူဆလင်လူဦးရေရာခိုင်နှုန်း၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော နယ်သာလန်နိုင်ငံက လူမျိုးပေါင်းစုံပြောင်းရွှေ့ အခြေချနေထိုင်ခွင့်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းရန် ခြေလှမ်းပြင်ဆင်ပြီဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ လူမှုအသိုင်းအ၀န်းတွင် အသွင်မတူ ဆန့်ကျင်ဘက်များဖြစ်ပေါ်စေသည့် မူဆလင်လူမျိုးများ ပြောင်းရွှေ့အခြေချခွင့်ကို အားပေးရာရောက်နေသည့် ပရိစ္ဆေဒ ကြာမြင့်စွာကျင့်သုံးလာခဲ့သော လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချခွင့်မူကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒတ်ခ်ျအစိုးရမှ ဖော်ပြလိုက်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 10:58:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ် ဘားအံ-မြ၀တီလမ်းတံတားကျိုးစစ် ဆေးရေးဂိတ်၌ ဗိုလ်ကြီးသိန်းဇော် ၀င်းဦးစီးသောအဖွဲ့၊ ဒုရဲမှူးအောင် ကြီးဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ဂိတ်စစ် ဆေးရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့မှ တာဝန် ယူဆောင်ရွက်နေစဉ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 10:48:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 10:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လားရှိုး ယနေ့ အခြေအနေမေလ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်
အရပ်အမောင်းကောင်း၊ ဗလတောင့်တောင်၊့ အရွယ်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီး လက်ရွေးစင် ရွေးချယ်ထားသလိုမျိုးပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 09:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး မှုခင်းအကူဌာနစုမှ ခိုးမှုများ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
၁၉.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ မှုခင်းအကူဌာနစုမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ခိုးမှုဖောက်ထွင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ တံတားလေးဘူတာအနီးတွင် တွေ့ရှိသူ ပြည့်ဖြိုးအောင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 09:39:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက်မှာ အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ အဝေးထိန်းဒုံးယာဉ်လို့ သံသယရှိရတဲ့ ဒုံးလက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါကစ္စတန်-တာလီဗန် တပ်မှူးကြီးတစ်ယောက်အပါအ၀င် ၆ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ၄ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 09:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၉-၅-၂၀၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှဖမ်းဆီးမိသောသတင်းတိုများ။
၂၉.၅.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၉၄၅ အချိန် ကော့မှူးမြို့နယ်၊ လက်ခိုက်ကျေးရွာ၊ ငြမ်းကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင် ဉာဏ်တော် ၁၇ ပေအမြင့်ရှိ စေတီတည်ထားရန် အတွက် စေတီ ဟောင်းနေရာအား အလုပ်သမားခေါင်း
ကိုအောင်မျိုးကျော်၊ (၂၆)နှစ်၊ (ဘ)ဦးစန်းဗိုလ်၊ ကွမ်းခြံကုန်း
မြို့နယ်နေသူပါ (၇)ဦးမှ မြေကြီးတူးဖော်စဉ် အုတ်ဟောင်းများကြားမှ
ဒဿမ ၃၀၃ ရိုင်ဖယ်ကျည်အဆွေး အမြေ့ ပုံစံမပျက် (၅၀)တောင့်၊ ထိပ်ဖူးမပါ (၃) တောင့်၊ ခြောက်လုံးပြူးကျည် အဆွေးအမြေ့
ပုံစံပျက် (၅)တောင့်တို့အားတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ကော့မှူးမြို့မရဲစခန်းတွင် သိမ်းဆည်းထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 09:19:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လားရှိုးမှာ တစ်ဦးသေ လေးဦးဒဏ်ရာရ
လားရှိုးမှာ ယနေ့ ညနေ နှစ်နာရီကျော်တွင် ထပ်မံ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံးပြီး လေးဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ် Facebook မှာဖော်ပြပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 08:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကချင်ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 08:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်သာယာ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန် စံကောင်း ပီနံအိတ် စက်ရုံမှာ အလုပ်သမား ၄၉ ဦးကို အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ကတည်းက ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ အလုပ် သမားတွေဟာ မနေ့ညနေပိုင်းကစလို့ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေကြပြီဖြစ်ကြောင်း ဒီကနေ့မှာ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 02:19:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/29/2013 12:47:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 10:37:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 10:21:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လားရှိုးမြို့အခြေအနေ မူလအတိုင်းဖြစ်အောင် မထိန်းနိုင်သေး
လားရှိုးမြို့ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ယနေ့ည ၉း၃၀ နာရီ နှင့် နောက်ပိုင်း ၉း၄၅ အထိ လားရှိုးမြို့ခံများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရသမျှမှာ လားရှိုးမြို့ကို စစ်တပ်နှင့် ရဲ တို့မှ အခြေအနေတည်ငြိမ်စေရန် ထိန်းသိမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခု အချိန်အထိ ပလီတစ်လုံး နှင့် အစ္စလမ် စာသင်ကျောင်း တစ်ခု မီးလောင်ပျက်စီး၊ ဆိုင်ခန်း ၄ - ၅ခန်းခန့် မီးလောင်ဆဲ ၊ (အမျိုးသမီး မီးရှို့ခံရပြီးနောက်) လူသူထိခိုက်မှု မရှိသေး ဟု သိရပါသည်။ ယခု ၉း ၅၀ နာရီအထိ မီးများလောင်ဆဲဟုလဲ သိရပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 11:26:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယနေ့ 28.5.2013- ညနေ (၄း၅၀)မှာ မူဆလင် ကိုနေဝင်းဆိုသူက ဒေါ်အေးဝင်း(၃၈)နှစ်ကို ဓာတ်ဆီပက်မီးရှို့ ပစ်လိုက်လို့ မြို့လူထုက ကိုနေဝင်းကို ဖမ်းပြီး ရဲစခန်းပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အေးဝင်းကို ဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနသို့ ပို့ထားပါတယ်။
ညနေ(၆း၀၀)နာရီကျော်မှာ ရဲစခန်းရှေ့ လူစုလူဝေးနဲ့ ကိုနေဝင်းကို ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ ကိုနေဝင်းက ကျိုင်းတုံကလာသည့် ဧည့်သည်ဖြစ်ပြီး၊ တည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ တည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 11:24:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 10:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နံနက် ၈း၃၀နာရီမှ နေ့ လည်၁၂း၀၀နာရီအထိတစ်ကြိမ်၊ မွန်းလွဲ ၂း၀၀နာရီမှ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအထိတစ်ကြိမ်၊ ဘုရားဖူးဘာသာတူများနှင့် လာရောက်လေ့လာသူများနှင့် ၀တ်ပြုဆုတောင်း သူများ အတွက် နေ့စဉ်ဖွင်လှစ်ပေးထားပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 09:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 09:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 07:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
"The Daily Eleven သတင်းစာပါ အမြန်လမ်းနှင့် ပတ်သက်သော အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကြောင့် The Daily Eleven သတင်းစာပို့သည့် ကားများအား အမြန်လမ်းမတွင် ဖြတ်သန်းခွင့် ပိတ်ပင်..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 01:27:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားလို့ လားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 01:04:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မိလ္လာချီး ပိုက် လိုင်း ထဲ ကို စွန့် ပစ်ခံရ တဲ့ ကလေး ကို ကယ်ဆယ် မှု အောင်မြင်
ရဲ့မိလ္လာ ပိုက် လိုင်း ထဲ မှာ ရှိ နေတဲ့ ကလေး ငယ် တစ်ယောက် ကို ကယ်ဆယ် ရေး အဖွဲ့ 
တွေ က ကလေး အသက် အန္တရယ် မရှိ အောင် မိလ္လာ ပိုက်လိုင်း ခက်ခက် ခဲခဲ ဖြတ် ထုတ် ပြီး ကလေး ကို
ကယ် ဆယ် နိုင်ခဲ့ တယ် လို့CCTV က ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2013 12:54:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/27/2013 11:30:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ခိုးမှုအမှုဟောင်း ၁ မှု ဖော်ထုတ်ရရှိခြင်း
၂၆-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၃၀၀ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အကူတပ်ခွဲ (၂)မှတပ်ဖွဲ့ဝင် များသည် ခိုးမှုကျူးလွန်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသူ မခင်သန္တာ(ခ)ခင်လေး၊ ၂၄ နှစ်၊ (ဘ) ဦးမြလှိုင်၊ ဆာဖာချောင်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်နေသူအား ၄င်း၏နေအိမ်မှ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/27/2013 09:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/27/2013 09:29:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြောက်ကိုးရီးယား၏ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုမှုကို တောင်ကိုးရီးယားငြင်းဆို
Re-post By ACM 27-5-2013
တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယွန်ဗြောင်ဆေးက မြောက်ကိုးရီးယား၏
နျူကလီးယားပယ်ရှားရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြန်စရန်တောင်းဆိုမှုကို မြောက်ကိုးရီးယားတို့၏ ရိုးသားမှုသက်သေကို ကြည့်ရှုရန် ပထမဆုံးလိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား ကာ ယနေ့ပယ်ချလိုက်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/27/2013 07:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တက်တူးအရုပ်ထိုးဝါသနာပါတဲ့ လူတွေ ဒါလေးတော့ သတိထား
အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တက်တူးထိုးရာတွင် အသုံးပြုသောဆေးရည် သည် အရေပြားကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများပါဝင်နေသည်ဟု သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/27/2013 07:13:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဆီးရီးယားကိုဒုံးလက်နက် မပို့ဖို့ ကန် နဲ့ ဂျာမနီ ရု...
လားရှိုးမြို့ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကာယကံရှင် မိသားစ...
ဘုရားတန်ခိုးကြောင့် အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ဟု လားရှို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပြောကြောင့် ကလေးမွေးနှုန်း ကန်...
၁၉ နှစ် ထောင်ကျခဲ့တဲ့မိခင်ကို သားက ကယ်ထုတ်နိုင်ပြီ...
အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင်ဖေ့စ်ဘုတ်မှာsexပုံစံကျနေလို ...
လားရှိုးမြို့ မီးလောင်ဆူပူမှုများဖြစ်ပေါ်ရသော အကြောင...
တစ်ကယ်အခက်ခဲဖြစ်နေသူပါ။နီးစပ်သူများ-ဆုတွေရတဲ့N.L...
၄.၆.၂၀၁၃ သောကြာနေ့ရုပ်ရှင်နှင့် ဂီတဘောလုံးယာဉ်ပြ...
သီရိလင်္ကာ ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ ၂၈ဦး ထပ်မံပြန်ပို့...
Wi-Fi လှိုင်းများကြောင့် အပင်များကို သေဆုံးနိုင်ဟုဆ...
လူမျိုးပေါင်းစုံ ရွှေ့ပြောင်း အခြေချခွင့်ဥပဒေအား နယ...
အမေရိကန်အဝေးထိန်းဒုံး တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တာလီဘန်တ...
၂၉-၅-၂၀၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှဖမ်းဆီး...
ကချင်ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်ေ...
စံကောင်း ပီနံအိတ်စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ...
လားရှိုးမြို့အခြေအနေ မူလအတိုင်းဖြစ်အောင် မထိန်းနိုင...
"The Daily Eleven သတင်းစာပါ အမြန်လမ်းနှင့် ပတ်သက်ေ...
အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားလို့ လားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံြေ...
မိလ္လာချီး ပိုက် လိုင်း ထဲ ကို စွန့် ပစ်ခံရ တဲ့ ကလေ...
မြောက်ကိုးရီးယား၏ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး တောင်းဆ...
ဘဝကို စိန်ခေါ် ပြီး မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးလှုပ်ရ...
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကျဆုံးခြင်း (သို့) UWSA ဝ စစ...
မြန်မာပြည်မှလာဘ်စား မှု အများ ဆုံး စီမံ ကိန်းများ အ...
ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင် မှောင်ခိုသယ်ဆောင်လာသည့် နွာ...
မန်းတွင် အိမ်စီးကားတစ်စီး လီဗာနှင့် ဘရိတ်မှားနင်းမ...
လေဆင်နှာမောင်း ဒဏ် ခံ ရသူများ ကို အိုဘာမား သွားရော...
မြန်မာနိုင်ငံမြို့ တော်တစ်ချို့ တွင်မြေအောက်မှရေထ...
--- ဦးသိန်းစိန် နဲ့အဘေး တွေ့ ဆုံ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟာင်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုဆန်းလွှင...
ှဆွီဒင်နိုင်ငံကသတင်းတို၅ ညတာဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက...
လူနှစ်ယောက် ဓာတ်လိုက်သေပှုံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ရ...
---အမေရိကန်နိုင်ငံ southeast Missouri မှာရထားနှစ်စ...
---အင်္ဂလန် မှာ မွတ်ဆလင် ဆန့် ကျင်ရေး တွေ အရှိန် မြှ...
---“တပည့်တို့ မျက်ရည်နဲ့ ခြေဆေးတဲ့ဆရာမ” (ဖြစ်ရပ်မှ...
ဂမ်းနမ်စတိုင် တေးသီချင်းအား စွန့်လွှတ်နိုင်ရန် ကြို...
---ခွေးအား မောင်းထုတ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်
---အဆုံးမဲ့ ပွင့်လင်းလျှို့ဝှက်တဲ့ မူးယစ်မှောင်ခို...
---အခမဲ့အမှုများ၌ အဓမ္မပြုကျင့်မှု အများဆုံးပါဝင်
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်၏ ဗုဒ္စဘာသာ ကူးပြောင်းရခြ...
---၃၀၀၀ကျပ် နေ့စား ဆန္ဒပြသမား နော်အုန်းလှနှင့်အဖွဲ့...
--- ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၂...
***ကျောင်းဖွင့်တော့မည် သို့သော် ကလေးတိုင်း ကျောင်း...
###သမ္မတကြီး အပေါ် အပြစ်ရှာသူများသို့ သတိပေးခြင်း (အ...
--- အာဖရိက အကောင်ကြီး အဆိပ်ပြင်း မြွှေပွေး---
---မြန်မာပြည်မှဥပဒေကင်းမဲ့ဇုန် သို့မဟုတ် မင်းလှ ရေ...
---ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး လှုပ်ရှားသူ ကိုထင်ကျော် ...
နိုင်ငံတစ်ကာထူးဆန်းထွေလာသတင်းအစုံလင် ၁၁ ပုဒ်ဖတ်ရန်...
---မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သန်းခွဲ ဘန်ကောက...
---၄၃လိုင်းကားပေါ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ နှို...
***သဘာဝအလျောက် ကျက်စားနေသော တောယုန်များအား မိုးကြိ...